Yakha itafile yeebheringi kunye nemida kwi-AutoCAD-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Yakha indlela kunye neebhokisi zebanga kwi-AutoCAD
Kule posi ndibonisa ukuba ungayakha njani itafile yeebheringi kunye nomgama wokuwela usebenzisa i-AutoCAD Sofdesk 8, ngoku eyi-Civil 3D. Ndiyathemba ukuba oku kuya kubuyekeza elo qela lokugqibela labafundi ebendinalo kwikhosi eyaziwa njenge-TopoCAD, endingenakuze ndiyigqibe kuba bendihamba nohambo… olohambo olungazange lundivumele ukuba ndifundise ngesimbo esidala kwakhona.
Siza kusebenzisa i-polygon efanayo yemisebenzi yangaphambilini, kwisithuba esiye sabona indlela Yakha iprogon ukusuka kwi-Excel, kwelinye sibone indlela ukudala iirveve kwenqanaba. Ngoku makhe sibone indlela yokwenza isihloko kunye nomgama webhokisi.
Isipoligoni sele senziwe, ngoko into enomdla kuthi kukuyakha njani isakhelo esinamaxesha, umgama kunye nezikhombisi.
1. Sebenzisa COGO
Ukwenza oku "I-AEC / iinkqubo ze-sotdesk" kwaye sikhethe "cogo"
Ukuba iqhutywa okokuqala, inkqubo iya kucela ukwenza iprojekthi. Kuya kufuneka ukuba ugcine ifayile ukuze wenze iprojekthi.
2. Cwangcisa isimbo sokubhala
Ukucwangcisa isitayile sokulebhelisha, senza la manyathelo alandelayo:
iibhile / iimfuno
Kwithebhu yesitayile somgca sichaza loqwalaselo:
Ngale nto sichaza ukuba isitayile sokubhaliweyo kwimigca yepholigoni, kule meko kuzakusetyenziswa iilebheli zamanani, ukuqala ngo-1. Olunye ukhetho kukuba umgama kunye nokuzala kubekwe kwimigca, kodwa kubangela ubunzima ekwakheni itafile indlela ecocekileyo. Oluqwalaselo lungagcinwa kwaye lilayishwe xa kufuneka njalo, kwiifayile ezandisiweyo .ltd
3 Faka iilebheli kwimigca ye-polygonal
Ngoku kufuneka sichaze ukuba zeziphi izikhululo zepoligoni esilindele ukuba isiseko sedatha siyamkele xa kusakhiwa itafile yesihloko. Ukwenza oku:
Iilebheli / iileyibhile
emva koko sithinta into nganye yokuwela, ekhohlo ucofa kwindawo ekufuphi kakhulu apho umgca uqala khona kwaye ucofe ekunene. Umqondiso wokuba into ibonakalisiwe kukuba isicatshulwa sisetyenziswe kuyo kwifom "L1", "L2" ... lo mbhalo usetyenziswe kwinqanaba elenziwa yiSoftdesk ebizwa ngokuba ziilebheli.
4 Yakha itafile yendlela
Ukwenza itafile, khetha "iilebheli / ukuzoba umgca wetafile". Ukuhlela igama letafile, tshintsha indawo ebizwa ngokuba yi "Line Table" ngu "Data Table", kunye nobukhulu bokubhaliweyo
Ukuguqula izihloko zekholamu zikhethwe ngonqakrazo olusekhohlo emva koko kusetyenziswa iqhosha lokuhlela. Le tafile ilandelayo sele ilungisiwe.
Ukufaka ibhokisi, cofa kwindawo ethi "khetha", emva koko ucofe kwiscreen kwindawo esifuna ukufaka kuyo ibhokisi. Kwaye i-voila, sele sinetafile yeebheringi kunye nomgama, onamandla amakhulu, oko kukuthi, ukuba umgca ulungisiwe, idatha etafileni nayo iya kuguqulwa. Ukuba idatha etafileni iguqulwe, i-vector ayiyi kuguqulwa.
Kuba Civil 3D, le nkqubo lula njengoko icela akukho kuphinda kwenziwe kuvimba, kuquka polygonal akhangele, inkqubo ulumkisa misclosure kwaye ukuba zivalwe ngenkani.
Kwesinye isithuba sibonisa indlela yokwenza into efanayo nge Microstation kunye ne-macro ephuhlisiwe kwi-Visual Basic.